DAGAAL CULUS: Sharma Boy oo live ku karbaashay Ilkacase Qeys. Daawo Muqaal - HALDOOR MEDIA
DAGAAL CULUS: Sharma Boy oo live ku karbaashay Ilkacase Qeys. Daawo Muqaal
January 6, 2021 January 6, 2021 Haldoormedia	247 Comments	Ilkacase Qeys, Sharma boy
Ayaantaan ayaa waxaa barta baraha bulshada qabsaday labada fanaan ee Rapka ku heesaa. Kuwaasoo heeso culculus hawada isku marinaayey. Dad badan ayaa kala taageeray fanaaniinta kuwaasoo midba midka kale difaacayo. Bulshada ayaana heesahooda siweyn ufalanqeynayeen.
Labada fanaan ayaa kala ah Ilkacase Qeys iyo Sharma Boy oo ku kala nool Nairobi iyo Muqdisho. Fanaanka Sharma Boy ayaa sanadkii lasoo dhaafay fankiisa horumar wey uu sameeyey. Kaasoo noqday fanaankii sanadka ee Muqdisho. Sidoo kale Ilkacase Qays oo fanka ka maqnaay in muda ah ayaa isla sanadkaans 2020 soo saaray heeso kuwaasoo ukala kaceen.
Waxaa dadka qaar is dhihi karaan fanka ayeey loolamayaan oo midba midka kale inuu qadka kabixiyo ama shacabka soo jiito ayuu rabaa. Halkaan Kadaawo Sharma Boy oo codkiisa ku qaadayada heeso live ah kana Ilkacase Qeys na walwal galineynsa in uu live heeso uqaadi karo ama playback ka heeso.
← DEG DEG: Qamar suugaani oo oohin afka furtay kadibna sheegay…
Naxdin:Qaali ladan oo maseyr dartiis jug xun u gaarsiisay seygeeda. →